Xulashada Austria | abuur mustaqbal wanaagsan
Caan ka ah Austria
Farshaxan Qaanso ah - Xaqiiqda La Diiday
Hoteelka Chesa Valisa: waa horjooge ka tirsan Bio Hotels
Waa maxay sababta kaabista Superfood & nafaqada?
Beddelka waxyaabaha Google | Qaybta 3
Gacanta Labaad ee Kirismaska
Awooda - meesha ay ku yaalliin isticmaalka korontada ee Austria
Milyaneer badan oo ah Rene Benko ayaa casuumay iyo hogaamiyaha Austria ee siyaasada, warbaahinta, dhaqaalaha ...
in Wararka ka imanaya shirkadaha waara
# Xanuunka dhabarka - si dhib yar qofna looma badbaadiyo. Gawaarida dhaadheer, shaqo fadhiisad
in Warka Hayadaha
#wirsindsauer - oo leh fiidiyow
in Beddelka iyo fikradaha, Austria
Kalandarka Kale ee Bilaabashada ah
Sahaminta: Ballaaran dakhliga aasaasiga ah ee aan shardiga lahayn
Biyo nadiif ah Didiksa - Tuulo Itoobiyaan ah ayaa adduunka ka beddeleysa - oo leh fiidiyoow
Wie in den meisten ländlichen Gegenden Äthiopiens gab es auch in Didiksa keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Bis wir 2018 gemeinsam mit der Bevölkerung eine […] dheeraad ah
Mit großer Freude durften wir wieder acht CULUMNATURA Haut- und Haarpraktikerinnen zertifizieren. Sie haben alle 8 Module der ganzheitlichen CULUMNATURA #Akademie abgeschlossen und gehen mit […] dheeraad ah
Xuquuqda carruurta iyo SDG - waa annaga iyo meeraheena!
Sanad kasta waxaan u dabaaldegnaa 20. Nofeembar maalinta carruurta # iyo u soo jiidashada "Shirweynaha Xuquuqda Caruurta". Sannadkan waxaa jira [...] dheeraad ah
in Austria, videos, Bulshada rayidka iyo ururada aan dawliga ahayn
Carruurtu waxay leeyihiin riyooyin - carruurtu waxay leeyihiin xuquuq
Carruurtu waxay leeyihiin riyooyin - carruurtu waxay leeyihiin xuquuq dheeraad ah
in Beddelka iyo fikradaha, Austria, Bulshada rayidka iyo ururada aan dawliga ahayn
Carruurta ku riyoon? xuquuqda carruurta!
+++ Maalinta Xuquuqda Caruurta Caalamiga ah +++ Muxuu ilmuhu ubaahan yahay inuu ku noolaado nolol wanaagsan? Jawaab cad ayaa laga helayaa su’aashan. [...] dheeraad ah
Niyad jabkii fiidnimadii, waxaan ku salaamayaa Ethiopia oo salaama Heimr ...
Dareenka fiidnimo ee caawa, waxaan ku salaamayaa Itoobiya oo bilaaba safarka guriga. Habeen wanaagsan Alexandra, MfM Vienna oo ka socda Abuna Ginde Beret [...] dheeraad ah
Iyada oo la socota barnaamijkeena Dreckspotz (www.global2000.at/dreckspotz) ee aruurinta qashinka ayaa ...
von caalami ah 2000
Iyada oo la adeegsanayo barnaamijkeenna 'Dreckspotz' (👉 www.global2000.at/dreckspotz) ee aruurinta qashinka, kulligiin waad ku biiri kartaan Abaalmarinta Sayniska Muwaadinka, oo aad ka caawisaan rayidka mashruucyada cilmi baarista ee sayniska! Maanta, ilaa xad [...] dheeraad ah
Maanta waxay ahayd maalin weyn. Peter Krasser oo ka socda Iskuulka Ethiopia wuxuu ku sii jeedaa Abu ...
Maanta waxay ahayd maalin weyn. Peter Krasser oo ka socda Verein Schule Ethiopien ayaa u safray Abuna Ginde Beret isaga iyo qaar ka mid ah taageerayaasha Austria si [...] dheeraad ah
"Xitaa bisaduhu waxay u qodo god ganacsigooda. Maxaynu halis ugu jirnaa ...
"Xitaa bisaduhu waxay u qodo god ganacsigooda. Marka maxay halis ugu jiraan cuduro halis ah markay si fudud u fududahay in la dhiso musqulaha? "[...] dheeraad ah
*** tip Recipe ***. Ka hadlida qaxwaha - miyaad horay u ogtahay buugga kariska qaxwaha? The ...
*** tip Recipe ***. Ka hadlida qaxwaha - miyaad horay u ogtahay buugga kariska qaxwaha? Marka lagu daro macluumaadka asalka ah ee kafee qaxwaha, arrintan ayaa leh cunnooyin xiiso leh oo loogu talagalay suxuunta ku habboon ganacsiga caddaaladda [...] dheeraad ah
Ma qiyaasi kartaa inaad la wadaagto biyaha gurigaaga dadka 6.000? ...
Ma qiyaasi kartaa inaad la wadaagto biyaha gurigaaga dadka 6.000? Dadka degmada Falo ee Jeldu waa runta. [...] dheeraad ah
Ma leedihiin musiibo bey'ad aragtidooda ku saabsan? ...
Ma isha ku haysaa dhammaan masiibooyinka deegaanka? Res Dabka 🔥, daadadka 🌊, abaarta ☀️, baraf aad u daran iyo daadad of qaybo badan oo Austria ah - waa isku mid? [...] dheeraad ah
OPUS - "Caawa At Opera 2019"
Afarta toddobaad waxay noqon doontaa mar kale Opus wuxuu ku weydiin doonaa "Caawa At Opera" oo marti sharaf badan ay u yihiin barnaamijka Graz Opera. Wixii lixaad [...] dheeraad ah
Shaqadaydu waa inaan biyo u helo qoyskayga maalin walba.
"Shaqadaydu waa inaan biyo u keeno qoyskayga maalin walba oo aan la wadaagayo saaxiibkay Ebise, waxaan aadaa ceelkeenna cusub. [...] dheeraad ah
Khudaarta cagaaran runti way ku farxi karaan. Labada da 'yarta ah ee beeralayda moodelkeena ah ...
Khudaarta cagaaran runti way ku farxi karaan. Labada ugu da’da yar ee beeralayda casriga ah Asmara sida iska cad waxay ku raaxeysanayaan chard Swiss cusub. Isagu waa soo dhaweynayaa isbedelka menu iyo [...] dheeraad ah
Ilaalinta shimbiraha: sida loo siiyo shimbiraha guri
Kaliya ma ahan dhicin iyo bees, xitaa shimbiraha 🐦 waxay leeyihiin deegaan yar iyo cunto yar oo ay heli karaan. Sideen guri ugu siin karnaa sanadka gudihiisa [...] dheeraad ah
Halxidhaafkeenna axadda Taabadalkeed, waxaan kuu rabnaa wax aadanaha ...
Halxidhaafkeenna axadda Taa bedelkeed, waxaan rabnaa inaan kugula tartanno aadame ahaan. 😉 Toddobaadka soo socda, waxaan isbaraynaa annaga iyo adiga Axad kasta oo yar oo [...] dheeraad ah
Sidoo kale adduunka Fanayse mustaqbalka wuu is beddali doonaa. Waxay leedahay e ...
Sidoo kale adduunka Fanayse mustaqbalka wuu is beddali doonaa. Waxay kaqeyb qaadatay mid kamid ah tababbarradeenii timaha xidhnaa, kaas oo iyada siiya dakhli wanaagsan [...] dheeraad ah
Dunida Antenne iyo qoyskiisa ayaa horay isbadalay. Wuxuu leeyahay k ...
Dunida Antenne iyo qoyskiisa ayaa horay isbadalay. Wuxuu abuuray janno yar. Beerkiisa waxay ku koraan babay, moos, tufaax, kala duwan [...] dheeraad ah
Timaha midabada midabka leh »HAIRMONIE timo qurxinta dabiiciga ah
von Tilmaamaha timaha dabiiciga ee timaha
Akhrinta talooyinka 🤩📚 Midabaynta timahaaga mid aan midab lahayn - ma taasi xitaa waa suurtagal? Nala soco! Ma leedahay timo jilicsan oo qallalan? Ka dib isku day Henna: Waxay jilcisaa [...] dheeraad ah
Casho ayaa horey loo qorsheeyay? Waxaan kugula talineynaa qumbaha-liinta cusboonaysiinta ...
Casho ayaa horey loo qorsheeyay? Waxaan kugula talineynaa maraq qumbaha-liinta-qaboojiye! Loogu talagalay dadka 4 waxaad u baahan tahay: - 1 bunch of coriander, jar jartey - 1 Organic Fairtrade lime, ayaa lagu cadaadiyey [...] dheeraad ah
Muuji inaad xanaaqsan tahay - sidoo kale sawirkaaga sawir-qaade!
Muuji inaad xanaaqsan tahay - sidoo kale sawirkaaga muuqaalkaaga! Waxaan sameynay naqshad sawir qaabeed oo muuqaal ah, si aad si fudud ugu adeegsan karto ficilkeenna [...] dheeraad ah
Maanta waxaan jeclaan laheyn inaan ku dhaho nabad gelyo leh halku dhigga sabtida
Maanta waxaan rabnaa inaan idin nabad galno adiga oo leh hadal ina xusuusinaya wax muhiim ah: in qof kasta oo bini aadam ahi uu gacan ka geysan karo samaynta adduunka [...] dheeraad ah
Tuulo Itoobiyaan ah ayaa adduunka beddeleysa - oo ku soo dhawow Didiksa - oo leh fiidiyoow
Menschen für Menschen wuxuu u taagan yahay qiimayaasha aasaasiga ah ee aadanaha iyo wadajirka. Ahmiyada ayaa markasta saaran dadka. Mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah. [...] dheeraad ah
Dadka ku nool tuulada Didiksa waxaa ka go'an horumarka ...
Dadka ku nool tuulada Didiksa waxaa ka go'an horumarinta gobolkooda iyaga oo leh xukun weyn. Waxaan u sheegnaa sheekooyinkooda iyo sida aan u wada shaqeyno [...] dheeraad ah
Ma xasuusataa Birye gabadha yar ee majaladda Nagaya? Waxaad h ...
Ma xasuusataa Birye gabadha yar ee majaladda Nagaya? Waxay lahayd goiter weyn oo qalliin ayaa lagu sameeyay. Waxaan haynaa maanta [...] dheeraad ah
Dukaan-xilliyeedka: Waa maxay xilligani?
Miyaad fiiro gaar ah siisaa xilli xilliyeedyada markaad wax iibsaneysid? ☀️ Maalmuhu way sii gaagayaan oo Dal-socod Bareyaashu hadda dib ugama noqon doonaan beeraha. 🍅 Xilliga [...] dheeraad ah
Waxaan ku soo noqonay Itoobiya maantana waxaan leenahay dhismo aad u qaas ah ...
2 saamiyada7 Codadka
Waxaan ku soo noqonay Itoobiya oo waxaan maanta booqannay goob dhismo aad u gaar ah oo aan la leenahay maareeyaha mashruuca Gebeyehu. Goor dhaw maydhashada labaad ee dadweynaha public [...] dheeraad ah
in Beddelka & Fikradaha
Alaabada haweenka ee nadaafadda, canshuur dhimista iyo warbaahinta xayeysiinta
2 saamiyada1 comment11 Codadka
Miyay tahay in wax soo saarka dumarka ee nadaafadda dumarka lagu soo dallaco qiimo jaban? Su'aal gubanaysa gudaha Austria, taas oo dabcan sidoo kale ay ka qaaddo warbaahinta. Iskusoo wada duuboo, ururka ORF wuxuu keenay warbixin [...] dheeraad ah
Waxaan nahay timo-dabiicad dabiici ah oo leh xukun buuxa - oo sidaas ayaan sameeynay tan iyo 30 J ...
Waxaan nahay timo-dabiicad dabiici ah oo leh xukun buuxa - oo aan sidaas samaynaynay sannadihii 30.🍃👍 Fikradda ganacsi waxaa laga sameeyay xamaasad dhab ah, dabiici ah iyo mid asal ah. [...] dheeraad ah
Taasi waxay ahayd carwada martida ee 2019! Waxaan si gaar ah ugu faraxsan nahay booqashada ...
Taasi waxay ahayd carwada martida ee 2019! Waxaan si gaar ah ugu faraxsan nahay booqashada Tekle Tadesse Gelgele, dadka kafee ka cabaya FAIRTRADE ee Itoobiya iyo inbadan oo [...] dheeraad ah
Ha iloobin: Adeegso fursadahaaga dimoqraadiga ah oo saxiix K ...
Ha iloobin: Adeegso fursadahaaga dimoqraadiga ah oo saxeex codsiyada isbedelka cimilada! Wir #wirsindsauer #notmyklimaplan #climateprogram hadda Source dheeraad ah
Maanta, kahor sanadihii 38, Karlheinz Böhm wuxuu aasaasay ururka Menschen für Mensch ...
Maanta, ka hor 38 sano ka hor, Karlheinz Böhm wuxuu aasaasay ururka Menschen für Menschen sidaas darteedna wuxuu aasaaska u ahaa "caawinta is-caawinta" ee malaayiin [...] dheeraad ah
Runtii waan ka xanaaqnay in wax talaabo ah laga qaadin dhibaatada cimilada.
Runtii waan ka xanaaqnay in wax talaabo ah laga qaadin dhibaatada cimilada! Miyaad xanaaqdaa sidoo kale? Markaas tus! Sawir ka qaad […] dheeraad ah
Maalin kasta waxay noqon kartaa "maalin timo wanaagsan". Sababtoo ah #Haargel of Herbanima wuxuu siinayaa ...
Maalin kasta waxay noqon kartaa "maalin timo wanaagsan". 😉 Sababtoo ah #Haargel ee Herbanima wuxuu bixiyaa iftiin, iyo sidoo kale soo kabeyn iyo qeexida curls. Caawiye wax ku ool ah oo […] dheeraad ah
Si fiican ayaad u taqaanaa FAIRTRADE oo waxaad dooneysaa xamaasad ku aadan fikirka si ka fiican…
Si fiican ayaad u taqaan FAIRTRADE waxaadna rabtaa inaad kiciso xamaasadda fikradda adduun ka wanaagsan? Markaa sax ayaad nagu tahay - dalbo [...] dheeraad ah
Waxaan kuu rajeyneynaa bilow wanaagsan isbuuca ...
Waxaan kuu rajeyneynaa bilow bilow ah isbuuca ☕🍌 Source dheeraad ah
Joornaalka "Attac 2019 / 2" wuxuu si kulul ugu socdaa saxaafada gudaha sanduuqyada xubnaheena iyo ...
Joornaalka "Attac 2019 / 2" wuxuu ka cusub yahay saxaafadda joornaalada xubnaheenna iyo deeq-bixiyeyaasha. Waxyaabaha kale ee ay ka mid yihiin mowduucyada: #Klimagerechtigkeit, #Mercosur, #Konzerne iyo #Treuergerechtigkeit iyo sidoo kale dhaqaalaha #Transform iyo [...] dheeraad ah
Maanta oo ah Maalinta Adduunka ee Sayniska Nabadda iyo Horumarka, waxaan dooneynaa ...
Maalinta maanta ee sayniska adduunka ee Sayniska Nabadda iyo Horumarka, waxaan jeclaan lahayn inaan wax kaa maqalno: Immisa arday ayaa mar horeba dhammaysay mid ka mid ah saddexda koorso ee shahaadada farsamada ee injineernimada Korantada [...] dheeraad ah
Marka laga yimaado qaab nololeed caafimaad leh, kaliya jirkaagu wax uma tari doono, laakiin sidoo kale jirkaaga ...
Laga soo bilaabo qaab nololeed caafimaad leh, kaliya ma ahan jirkaaga waxtarka, laakiin sidoo kale timahaaga. 🏃♀️ Gaar ahaan bilaha qabow, waa inaad: ► Biyo ku filan [...] dheeraad ah
#Waxaan ka walaacsanahay sababta oo ah siyaasada Austaralia ma soo bandhigto jadwal cad oo wax looga qabanayo dhibaatada cimilada! 😠 #NotMyKlimaplan miyaad la mid tahay? Kadib dheji sawirkaaga, [...] dheeraad ah
Markii maalmuhu sii yaraadaan oo heerkulku sii xumaado, qaar badan ayaa la silca ...
Nasiib darrose, markii ay maalmuhu sii yaraadaan oo heerkulku sii xumaado, qabowgu wuxuu ku bilowdaa qaar badan oo naga mid ah - nasiib darro, xafiiskeenna, sidoo kale, waxaan ku qabsanay qaar ka mid ah [...] dheeraad ah
3. Madal "Lacagta wanaagsan - maalgashiga qiima dheeri ah"
von Xarunta Deegaanka ee Raiffeisenbank Gunskirchen
Ku soo noqda adiga oo wax u qabanaya jawiga ama bulshada ka wanaagsan? Taasi xitaa suurtagal ma tahay? Haa, dheh khabiirada 3. [...] dheeraad ah
Öko-Test wuxuu ka digayaa cudurka kansarka iyo walxaha hoormoonka firfircoon ee ku jira alaabada daryeelka bushimaha
Waxa la yaab leh: tijaabada eco-test waxay ka digaysaa balmalka bushimaha la yaqaan. Waxaan kuu xaqiijin karnaa: wajiga LIP CARE ee wajiga gebi ahaanba waa ka bilaash saliidaha macdanta iyo waxyaabaha kale ee waxyeelada leh. Kaliya NATURE ayaa laga yaabaa [...] dheeraad ah
Dhacdooyinka & Demos
in Dhacdooyinka iyo demos, Austria
Magaalada Vienna ee loo yaqaan 'Grätzloasen' waxay u dabaal degaysaa maalinta PARK (ing) Maalinta 2019
Maalinta nadiifinta adduunka 2019
Soo gudbinta Grätzloasen ee loogu talagalay 2020
in Waxqabadka iyo codsiyada, Austria
Geedo fuushan adé!
NaDiVeG si weyn ayey u waafaqaysaa wanaaga guud
von Xanjada Silvia
Caga-cagaar - Qabooji: Gudbinta Qaboojinta Magaalada
in Waxqabadka iyo codsiyada, Austria, Bulshada Rayidka & NGO
Codsiyada iyo dadaallada ka socda Austria
in Waxqabadka iyo codsiyada, Austria, videos
# Dhirta GeedoFaxFareed. Kaliya samee. Badbaadada cimilada.
in Austria, Talooyin, videos
2040 - Waxaan badbaadinaa adduunka! - Trailer (german / german; FSK 0)